Sacuudiga oo Somaliya u soo diraya dhaqaatiir baara caafimaadka xoolaha Somaliya – STAR FM SOMALIA
Sacuudiga oo Somaliya u soo diraya dhaqaatiir baara caafimaadka xoolaha Somaliya
Wasaaradda Xannaada iyo Deegaanka ee dalka Sacudiga ayaa sheegtay in ay dhaqaatiir u soo direyso Somaliya si ay u baaraan caafimaadka xoolaha Somaliya ee ay dhoofsigooda hakadka gelisay.
Dhaqaatiirta ayaa la filayaa in ay tagaan Maxjarrada Xoolaha laga dhoofiyo ee Somaliya sida kan Berbera iyo midka Boosaaso oo ah meelaha ugu badan ee laga dhoofiyo Xoolaha Sacuudiga loo qaado.
Dowladda Sacudiga ayaa sanadkiiba 10-milyan oo Neef ka iibsata Caalamka,waxaana 5 Milyan oo ka mid ah ay ka qaadan jirtay Somaliya.
Wasiirka Xannaanada Xoolaha Somaliya Siciid Xuseen Ciid,ayaa sheegay in Dowladda Sacuudiga ay la soo xiriirtay Wasaaraddiisa kuna wargelisay Dhaqaatiirta ay u soo direyso Somaliya si ay u baaraan Xoolaha Somaliya.
Hakadka ay ku jiraan dhoofinta Xoolaha Somaliya ayaa waxa ay saameyn ballaaran ku yeelatay dadka Somaliyed ee xoolaha u dhoofin jiray dalkaasi.
Sacudiga ayaa Bishii December ee sanadkii hore joojisay dhoofsiga xoolaha Somaliya kadib markii ay sheegtay in Xoolaha ay kaga baqayaan Cudurka durayga ee ay Kaneecada u gudbiso Xoolaha Somaliya.
Ciidamada AMISOM oo lagu eedeeyay in wiilal walaalo ah ku dileen Shabeellaha Hoose
Taliyaha ciidamada Milatariga dalka Uganda General Wamala oo booqday Baraawe(Daawo Sawirada)